योग र मेरो अनुभव
यशोदा राई गौतम, सेन्ट मेरिज स्कुल
हाल : कोभ स्कुल फानबोरो, युके (शिक्षिका)
२०१५ अप्रिल महिनातिरको कुरा हो, मेरो ढाडको तल्लो भागमा एक्कासी समस्या सुरु भयो । निहुरिन नसक्ने, बसेपछि उठ्न नसक्ने, बस्दा वा उठ्दा दुवै हातको सहयोग चाहिने, भर्‍याङ्ग चढ्दा हातले टेकेर चढ्नु पर्ने जस्ता समस्या देखा पर्न थाल्यो ।
दुखाईको कारणले मनमा खिन्नताको आभास भैरहेको थियो । अब यस्तै दर्द र पीडामा कसरी काम गर्ने र बाँकी जीवन अरुको सहारा लिनु पर्ने हो की ? भन्ने जस्ता कुराले चिन्तित बनायो । जीपीमा जाँदा पेनकिलर र सामान्य व्यायाम सिकाई दियो । त्यतिले के हुन्थ्यो र? २० को १९ सम्म त भयो । फिजियो थेरापीमा गएँ, केही स्टेपहरु सिकाई दियो र गरियो पनि तर दुखाई भने कायमै रह्यो । जनतन केहि महिना जति यसरीनै बित्यो ।
योगा शारीरिक र मानसिक सन्तुलनको लागि राम्रो भन्ने कुरा मलाई पहिला देखि थाहा थियो र गरेको पनि थिएँ । छोटो समयको लागि तर खास खास समस्यालाई कुन कुन तरिकाले गर्ने हो भन्ने खासै ज्ञान थिएन । त्यहि समयको अन्तरालमा भाइ नगेन्द्रले योगा सिकाउनु हुन्छ भन्ने थाहा पाएँ । मेरो ढाडको दुखाई उहि थियो र उहाँसंग सोधे “दुखेको बेला योगा गर्नु हुन्छ? उहाँले, हुन्छ” भन्नु भयो । योगा कक्षामा म प्रत्येक हप्ता जान थालें । केहि हप्ता पछि श्रमिक रुपमा दुखाई कम हुदै गयो । त्यसपछि न त जीपी नै जानु पर्‍यो, नत फिजियो थेरापी नै । साथै शरीरको वजन पनि घट्दै गयो । यो अनुभव पछि मैले आप्mनो दैनिक जीवनमा सकेसम्म हिड्ने वा २०–४० मिनेट सम्म योगा अभ्यास गर्ने गरेको छु ।
मानिस सतप्रतिशत निरोगी हुन असम्भव छ । तर, त्यो प्रतिशतलाई बढी गर्नका लागि योगा अभ्यास, शाहकारी भोजन, सकारात्मक सोच, सहयोगी भावना, कम ईष्र्या र रिस सम्पूर्ण समयको सदुपयोग गरेको खण्डमा हामी स्वस्थ रुपमा बाँच्न सक्छौं भन्ने कुरामा मलाई कुनै शंका लाग्दैन ।
तर, योगा अभ्यासले औषधि जस्तो आजको भोली ठिक हुने होइन । यस अभ्यासलाई हामीले निरन्तरता दिनु पर्छ, अल्छी गर्ने, भ्याउदिन भन्ने हो भने हामीलाई पनि विभिन्न रोगहरुले सताउन सक्छ । कहिले काँहि त मलाई पश्चातापको भान हुन्छ किन मैले पहिलेबाटनै योगा सुरु गरिएन भनेर ।
बाँकी अर्को अंकमा....